रेडियो र म - Narayanionline.com
रेडियो र म
– वसन्त ढुंगाना
उ बेला घरमा फिलिप्स रेडियो थियो । म सानो थिएँ । त्यो रेडियोलाई कपडाको खोल बनाएर घरको भित्तामा झुन्डाइएको हुन्थ्यो । बुवाको विहान बेलुकी रेडियो सुन्ने दैनिकी नै थियो । बुवा राजनीतिमा चासो राख्ने मान्छे भएर होला बिहान सात र साँझ साढे सात बजेको घटना र विचार खुब सुन्नुहुन्थ्यो । हामीलाई त्यो समयमा चर्को स्वरमा बोल्ने अुनुमति हुँदैन्थ्यो । चुप हुनुपर्दथ्यो ।
बुवा घरमा नभएको समय भित्ताको रेडियो तर्फ दौडिहाल्थ्यौँ । अनि रेडियो घन्काउथ्यौँ । रेडियोमा बोल्ने मान्छे कस्ता हुन्छन्, यति सानो रेडियोमा मानिस कसरी छिर्दा हुन भन्ने खुवै कौतुहल्ता हुन्थ्यो । त्यो कौतुहल्ता मेटाउन एक दिन रेडियोलाई खोल्ने प्रयास गरेँ । मान्छे देखिएनन् । साङला थुप्रै थिए । मैले ठाने साङला बोल्दा हुन् । घरको दलिनका साङला किन नबोलेका सोच्थे । तर, हिजोआज त्यस्तै रेडियोमा मेरो स्वर गुञ्जिन्छ । अनि विगत सम्झेर हाँसो पनि लाग्छ ।
म सानैदेखि रेडियो पारखी । बुवासँगै रेडियो सुन्थेँ । यसमा बोल्न पाउँदा ठूलो मान्छे भइन्छ भन्ने लाग्थ्यो । एसएलसी दिएर प्लस टु पढ्न बाग्लुङबाट भरतपुर झरेँ । पढ्ने विषय रोज्न निकै दोधार थिएँ । बुवा र दाइहरुले पनि के पढ्ने कान्छा भन्नुहुन्थ्यो । म अलमलमा थिए । दाइले हाँस्दै भन्नुभयो पत्रकारिता पढ्छस् ? आहा ! म निकै उत्साहित भएँ । फ्याट्टै हुन्छ भनेँ । सोँचे रेडियो काम गर्ने मेरो चाहना पूरा हुने भयो ।
पत्रकारिता पढ्न सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भएँ । त्यो बेला १५ वर्षको थिएँ । केटाकेटीपन रेडियो बोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खुब लाथ्यो । रेडियो बढी सुन्न थालेँ । विस्तारै रेडियो खुल्न थालेँ । कालिका एफएम, सिनर्जी एफएम, हाम्रो एफएम, त्रिवेणी एफएम, सामुदायिक रेडियो नारायणी, गँैडाकोटको विजय एफएम निकै सुनिन्थ्यो । रेडियो स्टेसन भने गएको थिइन ।
एक दिन कक्षा १२मा पढ्दा गुरु मधुसुदन दवाडीले रेडियो घुमाउन लैजाउने कुरा गर्नुभयो । नियमित कलेज आउने आमसञ्चारका विद्यार्थी १२ जना जति हुन्थ्यौँ । हामी सबै सिनर्जी एफएम. अवलोकन गर्न गयौँ । त्यो समयमा सिनर्जी एफएम सिनर्जी चोकमा थियो । म रेडियोमा बोल्ने मान्छे कस्ता हुन्छन् । रेडियो कस्तो हुन्छ भन्ने जान्न निकै उत्साहित थिए । साँच्नै भन्ने हो भने रेडियोमा काम गर्ने मानिस त्यो बेलासम्म प्रत्यक्ष देखेको पनि थिएन ।
अझ चितवनको पहिलो रेडियो सिनर्जी एफएम घुम्न उत्सुक थिएँ । एफएफ. स्टेसन जानुपूर्व भ¥याङमा गार्ड थिए । उनले हामीलाई चेक गरेर मात्र भित्र जान दिए । हामी सोधपुछ कक्षमा बस्यौँ । पछि हामीलाई रेडियो देखाउन एक जना सर आउनुभयो । हामीलाई अन एयर, प्रोडक्सन, समाचार कक्षा लगायतका कोठामा लगेर त्यहाँ काम हुने विषयमा जानकारी गराउनु भयो । त्यतिखेर यहाँबाट हामी कहिले बोल्ने, काम गर्ने कहिले भन्ने सोचिरहेको हुन्थ्थेँ ।
यस्ता अनेक प्रश्न मनमा उब्जिरहेको थियो । त्यो समयमा संगिता लामिछाने दिदी रेकडर लिएर तल झर्नु भयो । उहाँले हामीलाई रेडियोमा बोल्ने भन्ने भन्दै प्रश्न सुनाउनुभयो । पहिलो पटक एक्कासी रेडियोमा बोल्ने भन्दा झस्किँए । के बोल्ने थाहा थिएन । लाजसगै डर पनि लाग्न थाल्यो । अन्य साथीहरु बोल्न तयार भइसकेका थिएँ । अन्तिममा मेरो पालो आयो । त्यतिखेर उहाँले नेपालमा बढिरहेको दण्डहिनतालाई रोक्न के गर्नुपला? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । जानी नजानी भनियो । पछि घरमा गएर रेडियो सुनियो । त्यो जनआवाजमा बजेको थियो । राम्रै पनि लाग्यो । यो नै मेरो रेडियोमा बजेको पहिलो आवाज थियो । सायद यो २०६८ साल तिरको कुरा हो । खुसी पनि लाग्यो ।
सोच्ने गर्थें समाचार लेख्न सकुला कि नसकुला । रेडियोमा बोल्न पाए कस्तो होला? कल्पनामा डुब्थेँ । बिए.पहिलो वर्ष सकिने समयमा मधुसुदन दवाडी सरले भन्नुभयो । रेडियोमा काम गर्ने? कुन रेडियो कहाँ के काम भन्ने केही पनि सोधिन् । उहाँको प्रश्न पुरा हुन नपाउँदै हुन्छ भनेँ । म अच्मित छु । सामुदायिक रेडियो नारायणी एफएममा काम थालियो ।
मनमा धेरै सपना बोकेर कामलाई निरन्तरता दिँदै गएँ । आफूलाई स्थापित गर्न प्रेरणा र अवसरसँगै चुनौतीहरु पनि थिए । काम सिक्दै गए । विस्तारै पत्रकारितालाई पनि बुझ्न थाले ।
६ महिनापछि चितवनको पहिलो रेडियो सिनर्जी एफएममा काम गर्ने अवसर मिल्यो । त्यहाँ ५ वर्ष काम गरियो । त्यहाँबाट धेरै सिक्ने अवसर पाए । रेडियोमा करियर नदेखेर कति साथीहरु छोडेर गए । तर, पत्रकारिता प्रतिको मोहका कारण रेडियो छोड्न सकिन । अहिले चितवनको कालिका एफएममा कार्यरत छु ।
समाजले पत्रकारलाई हात घुमाएर टन्न कमाउन सक्छन् भन्ने पेसाका रुपमा नलिएका पनि होइनन् । तर, पत्रकारको वास्तविक पीडा भनेर साध्य छैन । बिहान पाँच बजेदेखि राती दश बजेसम्म खटेर काम गरे पनि सहजै तलब न दिँदाको पीडा कति हुन्छ त्यो भोग्ने लाई थाहा होला । तर, त्यो भन्दा ठूलो कमाइ आवाज बिहीनहरुको आवाज बन्नु नै हो ।
अझै रेडियोको भूमिका अन्य सञ्चार माध्यमको भन्दा भिन्न छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा आम नागरिकको सबैभन्दा सजिलो र सहज पहुँज भएको सञ्चार माध्ययम भनेकै रेडियो हो । विभिन्न तथ्याङ्कले पनि सामान्य परिस्थितिमा ६० प्रतिशत नागरिकले सूचना पाउने पहिलो माध्यम रेडियो नै रोजेको देखाउँछ । अझ प्राकृतिक बिपत्ती, निर्वाचन र प्रकोप जस्ता असामान्य बेलामा ९० प्रतिशत नेपाली नागरिकले स्थानीय रेडियोबाट सूचना लिने गरेको पाइन्छ । जनताले यति भरोसा गरेको सञ्चार माध्यममा काम गर्ने हामी जस्ता पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ । दाग नलागेको ऐना जस्तो परदर्शी एवम् विश्वासिलो बन्ने उर्जा सबैलाई मिलोस् । रेडियो दिवसको शुभकामना !
(स्वास्थ्य बिटमा विशेष दख्खल राख्ने लेखक ढुंगाना चितवनको कालिका एफएममा कार्यरत छन् ।)
आइसोलेसनमा रहेकी ममीलाई छोरीले सुत्नेबेलामा सोध्थिन्: बाबा मामुलाई कहिले निको हुन्छ ?
बाँदरमुढे घटना सम्बन्धमा माओवादी पार्टीका ५ त्रुटि
उज्जवल थापाको निधनले नेपाली राजनीतिमा एउटा आशाको दियो निभ्यो
नेपालमा कोरोना भाइरस र लकडाउन
कहाँ छ दलितको साझा घर ?
संसद विघटनविरुद्धको एउटा रिटमा १० मिनेट बहस गर्न पाइने
साँखुमा आमा र छोरासहित तीन जना कोरोना सङ्क्रमित थपिए
कोरोना लागेका व्यक्ति दुबईबाट आएर होटेलमा बसेका थिएः स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल
कांग्रेस सभापति देउवालाई चीन भ्रमणको निम्तो
अदालतले संसद् विघटनबारे जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि कांग्रेसलाई मान्य हुन्छः देउवा